छविराज र शिल्पाविरुद्ध बहुबिवाहको मुद्धा दर्ता - Deshko News Deshko News छविराज र शिल्पाविरुद्ध बहुबिवाहको मुद्धा दर्ता - Deshko News
काठमाडौं । निर्माता छविराज ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले श्रीमाण छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोख्रेलविरुद्ध बहुबिवाहको मुद्धा चलाएकी छिन् ।
हेमाले महानगरिय प्रहरी वृत्त गौशलामा श्रीमान ओझा र सौता पोखरेलमाथि मुद्धा दायर गरेकी हुन् । ५३ वर्षीया हेमा र छविको २०४१ सालमा विवाह भएको थियो । उनीहरुका दुई छोराहरु छन् । विवाहपछि हेमा र छविको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको र केही समयदेखि मन मुटाव भएको हेमाले दिएको जाहेरिमा उल्लेख छ । छविको कार्य क्षेत्र फिल्मी भएकोले पनि उनले मन बुझाएकी र छविले पनि किन शंका गरेको भनेपछि उनी चुपचाप बसेकी पनि उल्लेख छ ।
जाहेरीका अनुसार छविसंग विभिन्न महिलाहरुको नाम जोडेर विभिन्न व्यक्तिहरुले सुनाएको र छविलाई सोधपुछ गर्दा सत्य नभएको जवाफ पटक पटक दिएको र कसैको सवालमा पनि प्रमाण नभेटिएपछि उनी विश्वास नै गरी बसेकी थिइन् । फेरि छविसंग शिल्पाको नाम जोडेर आएको हल्ला चल्दा हेमाले आफ्नो श्रीमाणलाई सोद्धा हामीले विवाह गरेको प्रमाण तिमीसंग के छ ? भन्ने जवाफ दिएपछि आफूले खोजेको ठाउँहरुमा केही प्रमाण नभेटेको हेमाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।
केही समयपछि मिडियामा पनि छवि र शिल्पाको चर्चा धेरै चलेपछि हेमाले सबै व्यक्तिहरुसंग सहयोग मागेर प्रमाण जुटाउन लागि परिन् । साउन ३ गते छविकै कार्यलयबाट उनकै कर्माचारीको सहयोगमा हेमाले शिल्पा र छविको विवाह दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्राप्त गरेको आधारमा आफू हुँदा हुँदै अर्का विवाह गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गरेकी छिन् ।
इलाम, मंसिर २३ इलाम श्रीअन्तुको होमस्टेमा आज दिउँसो आगलागी भएको छ । विद्युत् सर्ट भएर
काठमाडौं, मंसिर २३ नेपालमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाल ४५ स्वर्ण
पारस शाहले चढेको मोटरसाइकल कुन हो ? यसको मूल्य कति पर्छ ?
काठमाडौं, मंसिर २३ केही समयअगाडि पूर्वयुवराज पारस शाहको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो । त्यो भिडियोमा